UDavids uthi bazoqhubeka ngendlela yabo yokudlala eVenda sebebhekene neLeopards - Impempe
UDavids uthi bazoqhubeka ngendlela yabo yokudlala eVenda sebebhekene neLeopards
Uncome umoya wobunye, ukubambisana nenjabulo athi kuheleza ekhempini ye-Orlando Pirates njengamanje oyiphini lomqeqeshi kuleli qembu, uFadlu Davids.
IPirates ihambela phezulu kulezi zinsuku kulandela ukuthi ibhaxabulele iTshakhuma Tsha Madzivhandila ngo 3-0 ekhaya ngoLwesithathu ntambama.
“Umoya oheleza ekhempini njengamanje muhle kakhulu ikakhulukazi ngemuva kokuwina kwethu umdlalo odlule,” usho kanje uDavids.
IBucs ibuyela khona futhi eThohoyandou, eVenda, ngeSonto ntambama njengoba isiyobhekana neBlack Leopards emdlalweni weDStv Premiership ozoqala ngo 3 ntambama.
“Ukulungiselela kwethu umdlalo olandelayo sibheke kakhulu ekutheni abadlali belule imisipha, nokuphumuza imzimba. Sifuna ukubabona bekhombisa lokhuya kuzimisela nomdlandla enkundleni ngeSonto,” kuchaza uDavids.
Uthe iLeopards yiqembu okungelula ukuliqonda ukuthi lidlala kanjani ngoba linezindlela eziningi elivele lizishintshe nje esikhaleni ningazelele. Yingakho nje bona bezogxila endleleni abathanda ukudlala ngayo bakhohlwe okunye.
IBucs ihlasela ngesivinini esimangalisayo kule sizini kanti nokuzwana kwabadlali bayo abahlaselayo oVincent Pule, Thembinkosi Lorch, Gabadinho Mhango noDeon Hotto, kubenza babe yingozi enkulu uma bephethe ibhola bebheke phambili.
“Bayiqembu elidlala ngezindlela eziningi ezihlukene. Kuyenzeka basebenzise abadlali basesiswini abathathu, noma kube wu(Rodney) Ramagalela odlala ophondweni kodwa umthole esengumgadli khona lapho…
“Kumele sibuqaphe ubungozi babo kodwa sigxile kakhulu ekusebenziseni obethu ubungozi ikakhulukazi uma sihlasela,” kuchaza uDavids.
IPirates iya kulo mdlalo kuyiyo ebhekwe ukuthi ibuye namaphuzu aphelele kwazise isefomini enhle futhi ifuna ukubuyela endaweni yesine ukuze ingasali kakhulu emaqenjini azihola phambili. Njengamanje inamaphuzu angu-17 ewaqoqe emidlalweni elishumi.
Kanti iLidoda Duvha yona iwadinga ukufa amaphuzu njengoba kuseyiyo ebambe amabhuleki le emuva. Isaqoqe amaphuzu ayisithupha kuphela emidlalweni eyisishiyagalolunye.
Previous Previous post: Uthi isiqalo sezinto ezinhle ezizayo iwini yakhe yokuqala ebuyele kwiChippa uMalesela
Next Next post: Ukubuya kukaNtuli kuphathisa uBenni ngekhanda, kodwa elimjabulisayo